Faah faahin:- Nabadoon Axmed Jaxash oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nabadoon Axmed Jaxash oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad laga helayaa dil habeenkii xalay magaalada Muqdisho loogu geystay nin nabadoon ah, islamarkaana ka mid ahaa ergadii dhawaan wax ka dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Allaha u naxariistee, nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray Axmed Cali C/raxmaan Jaxash ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyay kooxo ku hubeysan bistoolado, waxaana lagu dilay xaafadda Dabaqeynka ee degmada Dharkeenley.
Marxuumka la dilay ayaa la sheegayaa inuu ka mid ahaa ergadii magaalada Jowhar kusoo dooratay xildhibaanada deegaanada Hirshabeele u matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Kooxihii dilka geystay ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen kadib markii ay dilka fuliyeen.
Dilka kadib waxaa goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda ee NISA, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah, balse ma jirtio cid ay howlgalkaasi kusoo qab-qabteen.
Illaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas’uuliyada dilka loo geystay Allaha u naxariistee nabadoon Axmed Jaxash.
Tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho kusoo batay beegsiga lagu haayo ergadii ka qeyb qaadatay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee dhawaan ka kala dhacay caasimadaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.